मंगल ग्रहबाट आएकी कप्तान कुरो र काला पोशाक लगाएका मानिसहरुे हास्य शैलीको पुस्तिका by Nick Broadhurst · OverDrive (Rakuten OverDrive): eBooks, audiobooks and videos for libraries
Captain Kuro From Mars Comic Strip Booklets in Nepali, no.4· Captain Kuro From Mars Comic Strip Booklets in Nepali
हास्य शैलीको पुस्तिका । यो "मंगल ग्रहबाट आएकी कप्तान कुरो" श्रृंखलाको चौंथो पुस्तक हो । यस पुस्तकमा, दुई जना काला पोशाक लगाएका मानिसहरु जोनको घरमा देखा पर्छन् । कुरो चिन्तित हुन्छिन् र जोन अनि उसको बुवालाई ती मानिसहरु पृथ्वीका होइनन् भनेर भन्छिन् । तिनीहरु अन्तै बाट आएका हुन् ! उनी लुक्नुपर्छ । तिनीहरुले आफूहरु एउटी सानी बिरालीलाई खोजीरहेको कुरा बताउँछन् र उनीहरुले यो विश्वास गर्छन् कि पूरा संसारभरि बच्चाहरु निको हुनुमा उनको हात छ । तिनीहरु विश्वास गर्छन् कि यो कुरा जोनको घर नजिकबाट आरम्भ भएको हो । तिनीहरुले अन्तरिक्ष जहाज त्यही नजीकैको जमिनमा झरिरहेको देखेको कुरा पनि जोनको परिवारलाई भन्छन् ।